Cadaadiskii Golaha Midowga Musharixiinta oo mira dhalay | KEYDMEDIA ONLINE
Cadaadiskii Golaha Midowga Musharixiinta oo mira dhalay
Golaha Miowga Musharixiinta Soomaaliya, ayaa ku guuleystay in ay ka hor tagaan dhowr qodob oo Farmaajo ku boobi lahaa doorashooyinka dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Qeyb ka mid ah cadaadiskii, baaqyadii iyo dadaalkii Midowga Musharixiinta Soomaaliya, ayaa hirgalay, kadib markii ay qasab ka dhigeen in hoos loo dhigo faragalintii ay Farmaajo iyo Fahad la damacsanaayeen doorashooyinka , gaar ahaan kuraasta Aqalka sare oo hadda gabo-gabo mareysa.
Mucaaradku waxa ay in muddo ah dalbanayeen in Farmaajo, faraha kala baxo maamulka doorashooyinka dalka, islamarkaana ku ekaado musharaxnimadiisa, waxayna si xooggan u soo jeediyeen in Ra’iisul Wasaaraha lagu wareejiyo hoggaanka amniga iyo doorashooyinka, taas oo ugu danbeyn hirgashay billowgii bishii May.
Mucaaradku, waxa ay madaxda maamul goboleedyada cadaadis ku saareen, in ay qabtaan doorashooyin aysan faragalin Madaxtooyada iyo Hay’adda NISA, (Farmaajo iyo Fahad), taas iyana waxa ay horseedday in Jubbaland, Puntland iyo Hirshabeelle, ay tuke cambaar leh ka noqdaan kooxda Farmaajo.
Mucaaradku, waxa ay dadaal kasta ku bixiyeen in ay ka hor tagaan damacii Farmaajo ee ku aadana inuu ku boobo dhamaan kuraasta Soomaaliland, isagoo arinkaas u adeegsanaya Mahad Guuleed iyo siyaasiyiin kale, isla-markaana doorashada Aqalka sare ku qabto Iskuul-buliisiyo, taas iyana waa ka hor tageen, oo soo jeedintoodii ayaa shaqeyesay, Lix kursi oo shalay lagu doortay Afisyooni midkoodna Farmaajo dhankiisa uma janjeero.
Midowga Musharaxiintu, waxa ay bishii January ee billowgii sanadkaan, soo jeediyeen in doorashada Xildhibaannada labada Aqal ee ka soo jeeda Somaliland lagu qabto Teendhada Afisyooni, si ay u noqoto mid daah furan oo faragelin la’aan ah, ka madax bannaan Farmaajo iyo in ay goobjoog ka noqdaan wakiillada beesha Caalanka, taasi sidii ay u dhaheen ayay u dhigantay.
Maamullada Koofur Galbeed, iyo Galmudug, ayaa u muuqda in doorashooyinkii Aqalka sare oo ay qabteen ay Madaxtooyadu saameynn ku lahayd, sidaas oo ay tahay, waxaa ka buurneyd saameynta ay mucaaradku ku lahaayeen.